ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ Archives - Page6of6- News @ M-Media
မတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media စုစည်းတင်ဆက်သူ- ဝေဇင် အိုဇေးလ် (ရီးယဲလ်/ဂျာမဏီ) [နာမည်ကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ] အမည်အပြည့်အစုံ မီစု အိုဇေးလ်(Mesut Özil) မွေးသက္ကရာဇ် ၁၅. ၁၀.[Read More…]
March 15, 2013 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ
မတ်လ ၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media ရှာဖွေတင်ပြသူ- ဝေဇင် ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ အမည်အပြည့်အစုံ ဆာမီရ် နာဆရီ (Samir Nasri) မွေးသက္ကရာဇ် ၂၆. ၆.[Read More…]
March 5, 2013 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ
အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပထမဆုံး မွတ်စလင်အားကစားမယ်
အိဗ်သီဟာဂ်ျ မုဟမ္မဒ်ကတော့ အာဖရိကန်-အမေရိကန်မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Fencer လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင် ဓားခုတ် ပရောဖက်ရှင်နယ် အားကစားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓားခုတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်မှာ မွတ်စလင်မ် အားကစားမယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်လာတာကတော့ အတော့်ကို ရှားရှားပါးပါးပါပဲ။ အိဗ်သီဟာဂ်ျကတော့ ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိထားပေမယ့်[Read More…]
July 30, 2012 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ, နိုင်ငံတကာသတင်း